राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै, लघुवित्तको चुक्ता पुँजी तत्काल नबढ्ने
२०७३ असार ३० बिहिबार, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिउँसो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा पारित गरेको छ । मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतीले पारित गर्ने प्रावधान छ । बिहान बसेको समिति बैठकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी तत्काल नबढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा अहिले ४० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । तीनको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्ज ... बाँकी अंश»
२०७३ असार ३० बिहिबार, काठमाडौँ । गत आइतबारदेखि प्राविधिक समस्याले ग्राउन्डेड भएको नेपाल एयरलाइन्सको बोइङ ७५७ विमान मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ । बोइङ ७५७ जहाजले प्राविधिकले मर्मत गरेपछि गएराति नै उडान भरेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उक्त विमानले गएराति ११ः४९ मा मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि उडान भरेको थियो । रासस ... बाँकी अंश»
अब तीन विधेयक पारित भएमात्रै बजेट पास, नभए के होला ?
२०७३ असार २९ बुधबार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४को लागि विनियोजन गरेको बजेट पास गर्ने कार्यतालिका बुधबार ११ बजे बस्ने संसद्मा राखिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा थप छलफलको लागि भनेर विशेष आग्रह गरेपछि बैठक बुधबार नै तीन बजेको लागि बोलाईएको छ । उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट पारित गर्नको लागि आवश्यक रहेका तीन विधेयकहरू पारित गर्ने कार्यतालिका रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अहिले बजेट पारित ... बाँकी अंश»
मीठाइमा क्यान्सर हुन सक्ने अखाद्य रङको प्रयोग
२०७३ असार २९ बुधबार, रोल्पा । जिल्ला सदरमुकाममा संचालनमा रहेका विभिन्न मीठाई पसलहरुमा क्यान्सर समेत हुन सक्ने अखाद्य रङको प्रयोग गरेको भेटिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुनय बास्तोलाको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले अखाद्य रङको प्रयोग भएको फेला पारेको हो । रङको प्याकेटमा अखाद्य पदार्थ लेखिएको देख्दा देख्दै समेत सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै व्यवसाय गर्नु कानून विपरीत भएको सहायक प्रजिअ बास्तोलाले बताए । हेर्दा आकर्षक देखिने विभिन्न ... बाँकी अंश»
२०७३ असार २९ बुधबार, मुगु । सोमबार राति परेको अविरल वर्षाले गमगढीमा रहेको सडक तहसनहस पार्नुका साथै सडक भएर बगेको बाढीले दिशा परिवर्तन गरी खेती लगाएको जमिनतिर बग्दा लाखौँको अन्नबाली नष्ट गरेको छ । बाढीले सदरमुकाम गमगढीमा रहेको गुम्बादेखि जिल्ला अस्पताल जाने चोकसम्म करिब एक किमी लम्बाइ, एक मिटर चौडाइ र एक मिटर गहिराइ भएको गल्छी बनाउँदा सडक तहसनहस भएको छ भने उक्त सडक भएर आएको बाढीले ठिनीको भागतिरको जग्गा कटान गर्दा लाखौँको अन्नबाली नष्ट हुनुका साथै जग्गा चिराचिर ... बाँकी अंश»
सरकार परिवर्तनको हल्लाले सेयर बजारमा ९ अङ्कको गिरावट
२०७३ असार २८ मंगलबार, काठमाडौँ। सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेपछि सेयर बजारमा नौ अङ्कले गिरावट आएको छ । राजनीति तरल भएको मौकामा एकाएक ओरालो लागेर एक हजार ६५४ अङ्कमा सीमित भएको बजार बन्द हुने समयसम्म भने सम्हालिएर पुन एक हजार ७०३ अङ्कमा कायम रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार ५४ अङ्कले गिरावट आएको नेप्से बन्द हुने समयमा भने नौ अङ्कले गिरावट आएर एक हजार ६९३ मा झरेको छ । कुल १३८ कम्पनीको १६ लाख ३९ हजार २५७ सेयर कारोबार भएको स्टकले जनाएको छ । कुल रु एक अर्ब १३ कर ... बाँकी अंश»
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन : अनियमितताबारे चाँडै निर्णय
२०७३ असार २८ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौताका विषयमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा निर्णय गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले सोलु कोरिडोरका सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायसँगको छलफल र परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अपारदर्शी निर्णय भएको र कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिइ बढी ... बाँकी अंश»
केरुङ जोड्ने सडक ग्राभेल गरिने
२०७३ असार २८ मंगलबार, धुन्चे (रसुवा)। नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका केरुङ जोड्ने सडकअन्तर्गत मूलखर्कको सडकमा ग्राभेल गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ। जिविसमा आज सम्पन्न सर्वपक्षीय भेलामा जिविस, सडक कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल, ट्रक कन्टेनर व्यवसायी समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र राजनीतिक दल समेतको सहभागितामा एक हप्ताभित्र मूलखर्क खण्डमा ग्राभेल गर्ने सहमति भएको स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिए। पासाङल्हामू मार ... बाँकी अंश»
राशन कार्डबारे अध्ययन गर्न समिति गठन
२०७३ असार २८ मंगलबार, काठमाडौँ । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न राशन कार्ड लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न छ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले यही २२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुका सहज आपूर्तिका लागि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा आप ... बाँकी अंश»
बुटवल पावर कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्ने
२०७३ असार २७ सोमबार, काठमाडौँ । बुटवल पावर कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरी रु दुई अर्ब १० करोड २२ लाख पाँच हजार ७०० पुर्‍याउने भएको छ । कम्पनीको आज सम्पन्न विशेष साधारणसभाले जारी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पद्म ज्योतिको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा कायम हुने गरी नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको प्रबन्धक दुर्गालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ निष्का ... बाँकी अंश»
नेप्से बीस अङ्कले घट्यो
२०७३ असार २७ सोमबार, काठमाडौँ । सेयर बजार एक महिनायताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सेयर बजारको मापक निकाय नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचकमा २० अङ्कले कमी आएको हो । करिब एक हजार ७४० अङ्कको हाराहारीमा पुगेको बजार एक हजार ७०० को हाराहारीमा कायम रहेको छ । कुल एक हजार ७२२ अङ्कमा रहेको नेप्से २० अङ्कले घटेर एक हजार ७०२ बिन्दुमा कायम छ । बैंक समूह ७.४२, विकास बैंक २७.७७ र फाइनान्स समूहमा ६.३८ अङ्कले कमी आएको छ । बिमा समूह २.३९, होटल समूह ४९.४१, जलविद्युत् ... बाँकी अंश»
तीनकुने पार्क निर्माणमा एक अर्ब लाग्ने
२०७३ असार २७ सोमबार, काठमाडौँ । तीनकुनेमा निर्माण गर्न लागिएको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न पार्क निर्माणका लागि रु एक अर्ब २३ करोड ४६ लाख ७५ हजार खर्च लाग्ने अनुमानित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा निर्माणका लागि अनुमानित लागत मूल्यसहित प्रारम्भिक ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने सन्देश दिन उक्त पार्कको मध्यभागमा १६ मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण गरिने बताइएको छ । &nbs ... बाँकी अंश»
'बैंकका सञ्चालकहरुको कार्यकाल सीमा हटाउनु गलत'
२०७३ असार २७ सोमबार, काठमाडौं। बैंकमा सञ्चालक रहेका सांसदहरुको सक्रियतामा अर्थ समितिले बैङकका सञ्चालकहरुको कार्यकाल नतोकि संसदमा पठाएको विषयमा पुन बहस सुरु भएको छ। केहि बैंकर्सले कार्यकाल तोक्न नहुने धारणा सहित पहल गरिरहेको बेला केहि बैंकर्सले भने कार्यकाल तोक्नै पर्ने धारणा राखेका हुन्। एपेक्स डेभ्लप्मेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद धितालले एक कार्यकाल नै प्रयाप्त हुने र बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा एउटै व्यक्ति सञ्चालक वा अध्यक्षको हुन नपाईने व्यवस्था ... बाँकी अंश»
वर्षाको उपहार : केआइ सिंह राजमार्ग अवरुद्ध
२०७३ असार २७ सोमबार, डोटी । आइतबार रातिदेखि लगातार भइरहेको वर्षाका कारण केआइ सिंह राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । डोटीको लाटामाडौँ गाविसको तिललातीदेखि मुडे गाविसको कालागाडसम्म करिब ११ किलोमिटर सडक अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले बताएको छ । वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा सडक माथिको भागबाट पहिरो आउँदा उक्त राजमार्ग अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले जानकारी दिए । अवरुद्ध सडकलाई सञ्चालन गर्न तिललाती प ... बाँकी अंश»
बाढी पसेपछि लघु जलविद्युत् परियोजना बन्द
२०७३ असार २७ सोमबार, बाबियाचौर । म्याग्दीको निस्कोट–३ मा रहेको रुम खोला लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहमा बाढी पसेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । ५१ किलोवाट क्षमताको परियोजनाको विद्युत्गृहभन्दा माथि खनिएको सडकबाट शनिबार राति आएको बाढीले टर्वाइनलगायतका उपकरणमा क्षति भएको छ । परियोजना बन्द हुँदा ७०० घरधुरी उपभोक्ता प्रभावित भएका परियोजनाका सल्लाहकार मोतीराज गौतमले बताए । सो परियोजनाबाट निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान र दरवाङ गाविसका बासिन ... बाँकी अंश»
कूल ९८ बस्तु मध्ये नेपाललाई १४ बस्तुमा मात्रै व्यापार नाफा, कुन् बस्तुमा कस्तो छ व्यापार स्थिती ? (सूची सहित)
२०७३ असार २६ आइतबार, काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७१-७२ सालको पहिलो ११ महिनाको ६ खर्ब २४ अर्ब १८ करोड २२ लाख ७० हजार रूपैयाँको व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागको पहिलो ११ महिनाको तथ्याङ्कले सो परिणाममा व्यापारघाटा रहेको तथ्याङ्कमा देखाएको हो । विभागले छुट्टाएको कूल ९८ बस्तुमा भएको कूल व्यापार मध्ये ६ खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड ७ लाख २२ हजार रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये जम्मा ६१ अर्ब २३ करोड ८४ लाख ५२ हजार रूपैयाँको म ... बाँकी अंश»
२०७३ असार २६ आइतबार, बागलुङ । जिल्लाबाट चालु आव २०७२/७३ मा तेह्र प्रजातिका जडीबुटी निर्यात भएको छ । साधारण च्याउ, सतुवा, वन लसुन, चुल्ठे अमिलो, विष्मा, नागबेली, चिराइतो, पदमचाल, दालचिनी, धूपीको पात, जटामसी, अतिस र खोटो निर्यात भएको हो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार गत वैशाखसम्ममा ८२ हजार ६८९ किलो जडीबुटी निर्यात भएको छ । जडीबुटीबाट रु एक लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला वन अधिकृत विन्दुकुमारी मिश्रले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी ७० हजार ८२० किलो सल्लाको खोटो निर्या ... बाँकी अंश»
नीति, कार्यक्रम र बजेट राष्ट्र विकासको प्रस्थानबिन्दु : प्रम
२०७३ असार २५ शनिबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्र विकास प्रयासको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले विकास नि ... बाँकी अंश»
दैनिक ४०० ग्राम तौल बढ्ने अफ्रिकन बाख्रा नेपालमा
२०७३ असार २५ शनिबार, भद्रपुर । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय झापाले अनुगमनका क्रममा झापा गोलधाप गाविसस्थित स्थानीय युवा गणेश पराजुलीद्वारा सञ्चालित प्रगति बोयर बाख्रापालन फार्ममा दक्षिण अफ्रिकाबाट रु सात लाख नौ हजार खर्च गरेर ल्याइएका दुई थान बोयर बाख्रा भेटिएका छन् । दैनिक ३०० देखि ४०० ग्राम तौल बढ्ने सो बोयर बाख्रा नेपालमा कहीँ पनि नभएकाले विदेशबाट मगाएको पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगभग दुई महिना पहिले ल्याइएका ती बाख्रालाई यहाँ अनुकूल वातावरण नभए पन ... बाँकी अंश»
सेवाग्राहीको भीड बढेपछि रोल्पामा शनिवार पनि बैंकिङ्ग सेवा
२०७३ असार २५ शनिबार, रोल्पा । नेपाल बैंक लिमिटेड रोल्पाले शनिवारको दिन पनि दिनभरी सेवाग्राहीहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड रोल्पामा अत्यधिक मात्रामा सेवाग्राकहीको चाप बढेपछि बैंकका कर्मचारीहरु निकै ब्यस्त बनेका छन् । सेवाग्राहीहरूको भीडको कारणले कर्मचारीहरुको व्यस्तता समेत बढ्न थालेको छ । सामान्यतया असार महिनाभरी नै बैंक परिसरमा सेवाग्राहीको चहल पहल देखिए पनि १५ गते यता बैकमा सेवाग्राहीहरूको भ ... बाँकी अंश»